Prof. U Tin Win – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
Posts By Prof. U Tin Win
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မျက်စိမြင်ကွင်း တစ်နေရာတည်းမှာ ကွက်ပြီး မမြင်ရတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စိမြင်ကွင်း (Field of Vision) မှာ တစ်နေရာတည်းကွက်ပြီး ကောင်းကောင်းမမြင်တာကို...
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မအဘွားက အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ပြီးတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ မျက်စိကို ဘာတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါသေးသလဲ။ A. အတွင်းတိမ်အပါအဝင် မျက်စိခွဲစိတ်ပြီးလို့ အချိန်တစ်လခွဲ- နှစ်လလောက်ပဲ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိမှာ ဘယ်လိုမှိုမျိုး ကပ်ငြိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စိမှာကပ်ငြိတဲ့မှိုပိုးဟာ မြန်မာပြည်မှာ Filamentous Fungi အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နီပေါ၊ ပါကစ္စတန်၊...
အတွင်းတိမ်က ကျောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. တချို ့လူနာတွေက အတွင်းတိမ်က ကျောက်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေလို့ ပြောကြတယ်။ A. မျက်လုံးအတွင်းတိမ်က နုရာကနေ ရင့်လာတယ်။ အဲဒီလို ရင့်တဲ့အခြေအနေမှာ...
မျက်စိရောဂါများကို သန္ဓေသားအချင်းဖြင့် အစားထိုးကုသခြင်း
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်ကြည်လွှာမရခင်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ သန္ဓေသားအချင်း အစားထိုးတဲ့နည်း (Aminotic Membrane) ကကော တုန့်ပြန်မှုဖြစ်တာမျိုး ရှိပါသလား ဆရာ။ A. ပင်မဆဲလ် (Stem...
ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေတယ် ဆရာ (Double Vision)
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိက ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလဲ၊ နှစ်ထပ်မြင်တာက ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတာလား။ ကုသလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာ။ A. မျက်စိက ကြည့်လိုက်လို့...
မျက်စိအတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်ပြီးချိန် လူနာတို့ လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိအတွင်းတိမ်ကို ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ လူနာတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ ဆောင်သင့်/ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Intraocular Surgery...
မက်ကူလာ ဖောရောင်ခြင်း (Macular Edema)
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မက်ကူလာဖောရောင်မှုအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မက်ကူလာဆိုတာ မျက်စိအာရုံခံလွှာရဲ့အလယ်အစိတ်အပိုင်း (Central Part of Retina)ကို...